Nalokhu, ngo-2012, kulandelwa izinhlinzeko ezifanele uchitshiyelwe inqubo kanye nemithetho yemali ukuthengiselana nezinhlelo ezihlukahlukene zomnotho we Russian Federation. Cabanga ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo lwamanye ezintsha.
Okokuqala, entsha imithetho yemali ukuthengiselana Akuthintayo ebanzi kunangaphambili, uhla ibhizinisi nezinhlangano, okuyinto aphoqelelwe ukuba uholwe zawo imisebenzi. Ngaphambili imithetho imali ukuthengiselana Bekulindeleke ukuthobela amabhizinisi, izinhlangano, izinhlangano kanye nezikhungo, kodwa manje badinga ukuqondiswa imisebenzi yayo ibhizinisi, zonke izinhlangano ezingokomthetho, kubandakanya izinkampani ezisebenza ngaphansi kohlelo lula intela, kanye osomabhizinisi ngamanye.
Empeleni, umuntu osomabhizinisi nabalawuli ebhizinisini isikhathi eside wazama sizokwenza ukugcina amarekhodi imisebenzi yabo yokuphatha balandela izimiso ekhona. Ngokwezinga elithile imithetho emisha yemali ukuthengiselana ukwanelisa izifiso zazo. Nokho, kumelwe ngivume ukuthi lukulesi sici, akukhona konke ezicashile imithetho emisha ziye ecatshangwe onjiniyela bazo. It ikhiqize imibuzo eminingi, kokubili kusuka ngokwabo osomabhizinisi, futhi izinhlangano zokulawula nokwengamela. Ngakho, idokhumenti entsha alinikezi cishe kokuhlukanisa osomabhizinisi kulabo sebenzisa waqasha zabasebenzi, nalabo abasebenzi emisebenzini yabo hhayi ezikhangayo. Kungokwemvelo ukuba ngalolu daba kuzodinga ukucaciselwa okwengeziwe we Central Bank of the Russian Federation.
Ngaphezu kwalokho, imithetho emisha njengoba iphathelene imisebenzi osomabhizinisi ngabanye, wangasho eziningana imibuzo futhi kudingeka iseluleko esisebenzayo nezimpendulo. Ngokwesibonelo:
ngokwezinga elifanayo uma imitsetfo entsha ukuze osomabhizinisi ngabanye ezisebenza ngaphandle zabasebenzi esiqashiwe, futhi abaphathi ngubani unelungelo ukuqhuba ukheshi ukuthengiselana;
indlela yokubhekana ukuqhutshwa wathola okwedlula umkhawulo, usomabhizinisi ngabanye, okuyinto awunazo akhawunti inkokhelo kunoma iyiphi ebhange, okuyilezi:
ngayiphi injongo, nokuthi kungenzeka ukuthatha imali yemali;
Njengoba usomabhizinisi ukukhokhela izisebenzi ukuba yena.
Kuyacaca ukuthi ngokoqobo imithetho emisha kungenzeka, futhi eziningi nezinye izinkinga ezidinga ukucaciswa.
Kodwa kufanele sivume ukuthi imithetho emisha yethulwe ngo-January 1, kukhona wonke eningi okuhle. Ngakho, manje ilungelo lokunquma kumkhawulo ibhalansi yemali yemali esandleni enikezwa izinkampani nosomabhizinisi ukuthi ukunquma usayizi yayo ngokukhipha idokhumenti zokulawula. Ibhange futhi kungenzeka noma bayakwenqaba noma ukuvuma. Ngesikhathi esifanayo, ibhange namanje sokusebenzisa kuwo ukulawula imali isiyalo. Futhi lokhu ibhange kwesokudla ubophekile ukuba lelisu okungenani kanye eminyakeni emibili.
Kusukela kulo nyaka, kancane esishintshile imithetho ka Umqhubi imali ncwadi. Manje, umuntu liyakushunyayelwa ecacile, okungaholela futhi lokusayina imiqulu imali ezifanele. Lokhu kungaba cashier (Cashier eziphezulu), ezinye ikhanda ukuze ezifanele noma inhloko yena (usomabhizinisi). Futhi inikeza izindlela ezimbili ukugcwaliswa kwemibhalo imali: ephepheni noma ngokusebenzisa ikhompyutha. Kulo mBhalo, le mibhalo kudingeka ukuba kunyatheliswe. Kuyefana nasendleleni incwadi imali.
Qaphela ukuthi izici ngisho okuxoxwe of kwamabhuku abonisa ukuthi imithetho emisha yemali ukuthengiselana kungase kubhekwe njengokwelapha ngomzamo ngibalethe eduze izimo zangempela lapho namuhla ibhizinisi iqhutshwa. Nakuba, yebo, kuze kube yilapho sonke engacacile kahle.
Izimali elihlehlisiwe - izimali eziye ingakamiswa wathola
Izinzuzo Social ukuthi anikezwa abesifazane abakhulelwe
Kabusha wesiFundazwe 1775. kabusha wesiFundazwe Catherine 2
Incazelo eqondile nengokomfanekiso yezwi, noma umdlalo wezingcingo ezijabulisayo